Ajụjụ - Shang Hai Tongke Flow Technology Co., Ltd.
1. Gịnị bụ mbupu n'ọdụ ụgbọ mmiri？
Dabere na arịrịọ ndị ahịa na-ebuga na ọdụ ụgbọ mmiri, ma ọ bụrụ na enweghị arịrịọ pụrụ iche, ọdụ ụgbọ mmiri bụ ọdụ ụgbọ mmiri Shanghai.
2. Gịnị bụ okwu ugwo？
30% ịkwụ ụgwọ site T / T, 70% T / T tupu mbufe, ma ọ bụ kredit L / C na anya.
3. Kedu ụbọchị nnyefe?
Nnyefe 30-60 ụbọchị site na ụlọ ọrụ mmepụta ihe mgbe ị natara nkwụnye ego dịka ụdị nfuli na ngwa dị iche iche.
4. Ogologo oge ole ka oge ikike ahụ dị?
18 ọnwa mgbe ngwaahịa bụ nnyefe si ụlọ ọrụ mmepụta ihe ma ọ bụ ọnwa 12 mgbe mmalite ojiji nke akụrụngwa.
5. Ma iji nye mgbe mmezi mmezi?
Anyị nwere ọkachamara injinia na-enye echichi nduzi na mgbe-sales mmezi ọrụ.
6. Ma iji nye ule ngwaahịa?
Anyị nwere ike inye dị iche iche nke ule na-atọ ndị ọzọ ule dị ka ndị ahịa chọrọ.
7. Enwere ike ịhazi ngwaahịa ahụ?
Anyị nwere ike ịhazi ngwaahịa dịka ihe ndị ahịa chọrọ si dị.
8. you na-enye ihe nlele?
Dị ka ngwaahịa anyị na-ahaziri n'ibu ngwaahịa, anyị n'ozuzu adịghị enye samples.
9. Kedu ụkpụrụ nke nfuli ọkụ?
Nfuli ọkụ dị ka ụkpụrụ NFPA20 si dị.
10. Kedu ụkpụrụ ọkọlọtọ kemịkal gị na-ezute?
Dabere na ANSI / API610.
11. I bu ulo oru mmeputa ma obu ndi ahia?
Anyị bụ ndị na-emeputa ihe, anyị nwere ụlọ ọrụ nke anyị, gafere asambodo sistemu ISO.
12. Kedu akwụkwọ gbara akwụkwọ maka ngwaahịa gị?
Anyị nwere ike ịnye ụdị ngwaahịa dị iche iche na-etinye maka nnyefe mmiri, usoro kpo oku na usoro jụrụ oyi, usoro ọrụ mmepụta ihe, ụlọ ọrụ kemịkalụ mmanụ, Usoro ụlọ, ọgwụgwọ mmiri mmiri, ọrụ ugbo, usoro ọgụ ọkụ, usoro mmiri nsị
13. Ihe omuma di a shouldaa ka a ga-enye maka nyocha n'ozuzu?
Ike, Isi, Ọkara ọmụma, Ihe ndị achọrọ, Mkpụrụ ma ọ bụ Diesel chụpụrụ, Mgba ọsọ. Ọ bụrụ na vetikal tobaim mgbapụta, anyị kwesịrị ịmata n'okpuru isi ogologo na orùrù bụ n'okpuru isi ma ọ bụ n'elu isi, ma ọ bụrụ na onwe priming mgbapụta, anyị kwesịrị ịmata mmiri Head ect.
14. nwere ike ịkwado nke ngwaahịa gị dị mma maka anyị iji?
Anyị nwere ndị ọrụ aka ọrụ aka ọrụ, dịka ozi ị nyere, jikọtara ya na ọnọdụ ahụ n'ezie, maka ịkwado ihe kwesịrị ekwesị maka ngwaahịa gị.
15. Kedu ụdị nfuli ị nwere?
16. Kedu akwụkwọ ị nwere ike inye maka ọnụego ahụ?
Anyị n'ozuzu na-enye ndepụta ndepụta, usoro na mpempe akwụkwọ data, ịbịaru, na akwụkwọ nyocha ndị ọzọ ị chọrọ. Ọ bụrụ n’ịchọrọ iri atọ ka ọnwunwa ịgba akaebe ga-adị mma, mana ị ga-akwụ ụgwọ iri atọ ahụ.